Ny beta ampahibemaso faharoa an'ny macOS Sierra dia efa misy | Avy amin'ny mac aho
MacOS Sierra 2 Public Beta 10.12 Azo alaina izao
Ny fivoaran'ny macOS Sierra 10.12 dia mitohy mandroso hatrany amin'ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny rafitra vaovao. Taorian'ny nahatongavan'ny beta 3 ho an'ny mpamorona tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, Apple nanao beta 2 ho an'ny daholobe ho an'ny mpitsapa voasoratra ao amin'ny Program Apple Beta.
Ity beta 2 vaovao ity dia mitovy amin'ny beta 3 ho an'ny mpamorona. Miaraka aminy, manana ny fahafaha-manao ny mpampiasa mifanerasera amin'ny fanatsarana rehetra, ao anatin'izany ny andrana sasany hanamarinana fa ny lesoka tamin'ny kinova teo aloha dia nohamarinina.
1 Seho vaovao sasantsasany amin'ny macOS Sierra
2 Ampidiro ny beta faharoa an'ny macOS Sierra
Seho vaovao sasantsasany amin'ny macOS Sierra
Na dia tsy mampiseho fiovana lehibe amin'ny maso mitanjaka aza ireo beta dia macOS Sierra a fanavaozana tanteraka ny lampihazo. Taloha WWDC 2016 ny endri-javatra rehetra izay hoentin'ny rafitra Apple vaovao ao amin'ny solosaintsika dia natolotra.
Ny manasongadina ny macOS Sierra manaraka dia tsy isalasalana fa ny fampidirana an'i Siri amin'ny rafitra. Tsy hamaly fanontaniana fotsiny ilay mpamosavy fa ho tafiditra tanteraka. Siri hanao mitadiava rakitra ary manao asa manokana.
Fa ankoatran'i Siri, ny macOS Sierra dia hanisy fanatsarana ny Fampiharana sary, fampifanarahana ny dika mitovy / apetaka manerantany amin'ireo fitaovana Apple hafa amin'ny alàlan'ny clipboard, araka ny nandrasana hanalana ny hitsoka ao miaraka amin'i Apple Watch, a fampirimana fampandrenesana amin'ny iCloud ary ireo fiasa maro hafa izay ho tafiditra ao amin'ny kinova farany, toy ny Apple Pay amin'ny alàlan'ny Safari. Ao amin'ny SoydeMac dia azonao atao ny mamaky ny fanadihadiana beta teo aloha macOS Sierra.
Ny fisian'ity beta ity dia mifantoka amin'ny fanatsarana anatiny sy ny fampiasana izay hahatratrarana a tontolo iainana tsara kokoa. Ny fanatsarana ny fiarovana sy ny vahaolana amin'ireo bibikely isan-karazany no mahatonga ny sehatra azo antoka kokoa sy mitokana noho ny hatramin'izay, ny teboka manan-danja indrindra ho an'ny orinasa.
Ampidiro ny beta faharoa an'ny macOS Sierra
Ny beta efa azo apetraka amin'ny iMac na Macbook mifanentana miaraka amin'ny kinova beta teo aloha an'ny macOS Sierra. misy tester voasoratra anarana Ao amin'ny programa dia azonao atao ny miditra manomboka anio mankany amin'ny fametrahana beta faharoa ho an'ny daholobe macOS Sierra. Raha mbola tsy voasoratra ara-dalàna ianao ary liana te-ho tonga tester, tsidiho ny tranokala ofisialin'ny programa beta avy amin'ny Apple aiza afaka misoratra anarana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » MacOS Sierra 2 Public Beta 10.12 Azo alaina izao
Safari Technology Preview dia tonga amin'ny kinova 9
Omnifone, fahazoana mozika vaovao ho an'i Apple